सुर्खेतमा बुलबुले ताल , तस्बिर नलिई मान्दैन मन के गर्ने होला ? - ParyatanBazar.com
सुर्खेतमा बुलबुले ताल , तस्बिर नलिई मान्दैन मन के गर्ने होला ?
जेठ ६, वीरेन्द्रनगर । बुलबुले ताल नजिक ढकमक्क बारीमा फुलेको पहेँलो फूल वरिपरि हरियाली छ । छेउमै तालमा डुङ्गा सयर गरिरहेको । त्यहाँ पुग्ने जो कोहीको तस्वीर नलिइकन फर्कन मान्दैनन् । बुलबुले ताल हेर्न जानेको तस्वीर खिचाउनको लागि भीडभाड देखिन्छ हिजोआज । तस्वीर खिच्नेको लाइनमा कोही आफ्नो सेल्फी खिच्दै, कोही अरु साथीहरुको तस्वीर खिचिदिँदै । कोही पहेँलै फुलेका फूलको दृश्य अवलोकन गर्दै ।
यो दृश्य हो सुर्खेतको बुलबुले उद्यान नजिक रहेको सूर्यमुखी खेती गरिएको एक बारीको । चारजना युवा मिलेर व्यावसायिक रुपमा सूर्यमुखीको खेती गरेको यो बारी अहिले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षण बन्ने गरेको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालसँगै मनोरञ्जनात्मक भिडियो बनाइने ‘टिकटक’मा यो बारीको दृश्य धेरै नै प्रयोग हुँदै आएको छ ।
‘दिनमा १५० भन्दा धेरै यहाँ आउनुहुन्छ, शनिबार त ३०० जति पुग्छ ।’ उक्त सूर्यमुखी खेती गरेकामध्ये कपिल अधिकारीले भन्छन्, ‘हाम्रो बुलबुले नजिकै भएकाले त्यहाँ आउने यहाँ अनिवार्य आउनुहुन्छ ।’ स्थानीय कपिल अधिकारी, लक्ष्मी अधिकारी, धनिराम अधिकारी र सज्ज ढकाल मिलेर छ कट्ठा जमीनमा व्यावसायिक रुपमा सूर्यमुखीको खेती गरेका छन् ।
वार्षिक एक लाख ४० हजार भाडामा जग्गा लिएर गरिएको फूल खेतीमा रु दुई लाखभन्दा धेरै लगानी लागेको सज्जन ढकालले बताउनुभयो । सूर्यमुखीको बारीमा फोटो खिचाउन आउने मानिसले प्रतिव्यक्ति रु १० तिर्नुपर्छ । यसरी दैनिक १५० मात्र आए पनि न्यूनतम रु एक हजार ५०० आम्दानी हुन्छ ।
यो पहिलो अनुभव भएकाले अहिलेको खेती सिकाइका रुपमा मात्र आफूहरुले लिएको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा सूर्यमुखीको खेतीमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको ढकालको भनाई छ । रासस